Hoentanina ny mpampiasa sy ny reny : 5% monja ny orinasa manaja ny fahazoana mampinono | NewsMada
Hoentanina ny mpampiasa sy ny reny : 5% monja ny orinasa manaja ny fahazoana mampinono
Miantoka ny fanjarian-tsazkafon’ny zaza latsaky ny 2 taona ny fampinonoana azy tsisy fangarony vao teraka ka hatramin’ny fahenimbolany. Vitsy anefa ny mpampiasa manaja ny zon’ny reny miasa hampinono. Hoavy ny sazy…aorian’ny fanentanana hatao.
Hihetsika tsy ho ela ny task force hanentana isaky ny toeram-piasana amin’ny sehatra tsy miankina, orinasa miankina amin’ny fanjakana ny tokony hametrahana toerana fampinonoana ho an’ny reny vao avy niteraka ka miasa. Araka ny lalàna manan-kery ao amin’ny lalàna mifehy ny asa eto Madagasikara, manana ora iray isan’andro mandritra ny 15 volana voalohany hampinonoana ny zanany ny reny rehetra. Mbola nohamafisin’ny lalàna ny 62-152 ny taona 1962 fa tokony manana toerana manokana ao anatin’ny orinasa ihany ahafahan’ny vehivavy rehetra mampinono ny zanany ny orinasa mampiasa vehivavy mihoatra ny 25, araka ny fanazavan’ny talen’ny fiahiana sosialy ny mpiasa, ao amin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana, Rafarahanta Nirina, omaly teny Ambohidahy.
Hatramin’izay, tsy nisy ny resaka sazy voafaritra ao amin’ny lalàna ampiharina amin’ny mpampiasa na tompon’ny orinasa tsy manaja ny lalàna velona momba ny zon’ny vehivavy miasa mampinono. Asa iray hotanterahin’ny teknisianina ny fandrafetana izany hifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny. Amin’ny ankapobeny, 5% amin’ny orinasa miorina eto amintsika na miankina na tsia no manaja io lalàna momba ny fahazoan’ny vehivavy miasa sady mampinono ary mametraka toerana voatokana ho amin’izany. Hidina isaky ny orinasa rehetra ny tomponandraikitra amin’ny task force hampatsiahy ny fisian’ny lalàna manan-kery. Aorian’ny fanentanana, hiverina hanao fanahara-maso ny fanajana ny fampiharana ny teknisianina. Hoavy amin’izay ny fanasaziana raha tsy tratra manara-dalàna ny mpampiasa. Ho an’ny fahazoana ora iray hampinonoana isan’andro, afaka mitaraina eny amin’ny sampan-draharaha momba ny fanaraha-maso ny asa ny reny mahatsapa fa tsy voahaja ny zony.
Midina hatrany ny tahan’ny fampinonoan-dreny tsy misy fangarony eto amintsika, 41.9% ny taona 2012 raha 67% ny taona 2003. Anisan’ny antony mahatonga izany ny tsy fahafantaran’ny reny miasa fa afaka mampinono any am-piasana izy ireo. Eo koa ny rotoroto amin’ny asa mampihena ny nono miakatra. Vahaolana iray iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny zaza latsaky ny 5 taona ny fampinonoana ny zaza tsy afangaro sakafo hafa hatramin’ny fahenim-bolany.
Any Antsirabe ny fanamarihana ny herinandron’ny fampinonoana manomboka amin’ny alatsinainy satria mamokatra sakafo betsaka ny faritra Vakinankaratra nefa 65% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo. Toerana maro orinasa mampiasa vehivavy koa any an-toerana ka hanomboka ny fanentanana fampahafantarana ny zon’ny vehivavy miasa mampinono. Tanjona ny hampiakatra ny tahan’ny fampinonoana ho 50% ka hatramin’ny 90%.